इन्डिया र नेपालमा कुन बढी राम्रो ? भारतियले यस्तो भिडियो बनाएछन – भिडियो सहित ! | Saajha Khabar
इन्डिया र नेपालमा कुन बढी राम्रो ? भारतियले यस्तो भिडियो बनाएछन – भिडियो सहित !
Posted by Saajha Khabar On April 16, 20180Comment
Previous: बाबुआमा गाईभैंसी हुन् र पाल्नलाई ? अनि कसिंगर हुन् र फाल्नलाई ?
Next: रामदेवले दलाई लामालाई “तिमी ‘गुरु’ होइनौ ‘गोरु’ हौ” भनेपछि ( हेर्नुहोस् भिडियो सहित् )अनि सक्दो सेयर गरौं !!